FANESORANA NY FILOHA AMIN’NY TOERANY : Andrasana amin’ity herinandro ity ny fanapahan-kevitry ny Hcc
Efa hatramin’ny faran’ny herinandro lasa teo no nandrasana ny fanapahan-kevitr’ireo mpikambana eo anivon’ ny Fitsarana avo momba ny lalàm-panorenana mahakasika ilay fitoriana ho amin’ny fanesorana ny Filoham-pirenena amin’ny toerany. 8 mai 2018
Hatreto anefa mbola tsy namoaka izay heviny ny Hcc, raha toa ka samy miandry fatratra izany ny rehetra. Tokony ho 15 andro aorian’ ny nametrahana ilay fitoriana ihany koa no ivoahan’ny valiny, araka ny fanazavan’ireo mpahay lalàna. Araka izany , amin’ity herinandro ity no tokony hamoahan’ny Hcc izany.
Nilaza ireo mpitolona fa ity no herinandro hanan-danja eo amin’ny fiainam-pirenena sy ny fiainan’ny vahoaka malagasy eo anatrehan’ny famoahan’ny Hcc izay ho fanapaha-keviny. Fikambanana maro sahady no mijoro ankehitriny miantso izay fandraisan’andraikitry ny Hcc izay. Anisan’izany ny fikambanana ho an’ny fanovana, ny sabotsy lasa nanao fanambarana izy ireo ary miantso ireo mpikamban’ny Hcc amin’ny tokony haneken’izy ireo ny fitoriana napetrak’ ireo solombavambahoaka ho amin’ny fampiatoana ny Filoham-pirenena amin’ ny asany. Nambarany fa tsy nahatanteraka ny andraikitra tokony nataony ny Filoha, anisan’izany ny tsy mbola nahatafantsangana ny “haute cour de Justice” (Hcj) izay tokony nataony herintaona taorian’ny nanaovany fihanianana.
Mangataka araka izany ity fikambanana ity ny haneken’ny Hcc ny fitoriana napetrak’ireo depiote ny amin’ny mbola tsy nananganan’ny Filoham-pirenena an’io rafitra iray io. “Mitodika any amin’ny Hcc mba hamaliany an’iny fitoriana iny, hoe aiza ny fanesorana ny Filoham-pirenena satria tena mazava mihitsy ao anatin’ny lalàm-panorenana fa rehefa tsy mahatafatsangana ny Hcj ny filoha dia tokony miala”, hoy ny fanazavana noentin’ireo mpikambana.